Madaxweyne Siilaanyo Oo Ciidamada Hortooda Ka Cadeeyay In Gacan Bir Ah Lagu Qabanayo Askariga Sarkaalkiisa Toogta Kana Qaybgalay Xuska Aasaaska Qaranka - Somaliland Post
Home News Madaxweyne Siilaanyo Oo Ciidamada Hortooda Ka Cadeeyay In Gacan Bir Ah Lagu...
Madaxweyne Siilaanyo Oo Ciidamada Hortooda Ka Cadeeyay In Gacan Bir Ah Lagu Qabanayo Askariga Sarkaalkiisa Toogta Kana Qaybgalay Xuska Aasaaska Qaranka
Hargeysa(SLpost)-Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka qaybgalay xuska 22 guurada aasaaska ciidamada qaranka, waxaanu ciidamada u cadeeyay in gacan bir ah lagu qaban doono askarta dilaysa saraakiisha, waxaanu hanbalyo u diray guud ahaan ciidanka qaranka iyo shacbiga Somaliland
Waxaana qudbadaas oo dhamaystiran ay u dhignad sidan “Milgo iyo maamuus weyn bay ii tahay maanta in aan ka soo qayb-galo Xuska Sannad Guurada 22aad ee Aasaaska Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Aniga oo ka faa’iidaysanaya madashan iyo munaasibadan taariikhiga ah, waxaan jecelahay inaan hambalyo iyo bogaadin balaadhan hawada u mariyo cutubyada kala duwan ee Ciidanka Qaranka Madax iyo Minjo. Mar kale, munaasibadan awgeed waxaan hambalyo u dirayaa Qoysaska Ciidanka Qaranka iyo guud ahaan Shacbi-weynaha Somaliland.
Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa hal-doorkii u kala danbeeyey hal abuurka iyo hogaaminta Ciidanka Qaranka, ragaas oo ay ka mid yihiin Mudane, Xasan Cali Abokor, Taliyihii u horreeyey ee Aasaasay Ciidanka Qaranka. Mudane, Cismaan Cawed Xaashi (Cismaan Dacas). Mudane, Xasan Yoonis Habane, ilaahay ha u naxariisto. Mudane, Cabdi-samad X. Cabdillaahi (Gamgam). Mudane, Nuux Ismaaciil Taani Mudane, Maxamed Xasan Cabdillaahi (Jidhif). Mudane, Ismaaciil Maxamed Cismaan (Shaqale).
Qaran aan ciidan iyo cudud adag lahayni, cadaw iskama caabiyi karo, wuxuuna ka dhigan yahay ruux curyaan ah oo aan haba yaraatee cago lahayn. Cuudka, Caqliga iyo Cududa Milateri, waa cawada iyo ayaanka uu maanta caalamku is-dheer-yahay. Sidaa darteed, waa ilaahay mahadii in uu ciidankeenu gaamuray oo laba iyo labaatan gu oo gaw ah uu baarka ka gooyey. Shaki kuma jiro mudaddaa dheer in uu tisqaaday aqoon ahaan, agab ahaan, tiro ahaan iyo tayo ahaanba.
Ujeedada Ciidanka Qaranka loo abuuray ma’aha in bulshada loogu caga-jugleeyo ama lagu cabudhiyo. Hase yeeshee, waxa loogu talo galay in ay sugaan amaanka dadka, isla markaana difaacaan cadaw kasta oo ku soo duula Dalkeena Hooyo. Arrintaas waxaa markhaati ma doon u ah goob kasta oo ay Ciidanka Qaranku ka hawlgalaan min Bari ilaa Galbeed waxa ka suurtagashay nabad waarta iyo nolol wanaagsan. Miyaanay ahayn wax lagu farxo ama lagu faano awoodda, aqoonta, anshaxa iyo asluubta wanaagsan ee Ciidamada Qaranka meel kasta oo ay joogaan maanta lagu majeerto.
Waxaan idin leeyahay Shacbiga aad ciidanka u tihiin caad kama saarna xilka culus ee aad u haysaan. Waxaa hubaal ah in aad nafihiina u hurtaan difaaca Dalkiina Hooyo. Waxaa hubaal ah in aad heegan ugu jirtaan habeen iyo maalin ilaalinta amniga iyo adkaynta nabadgelyada ummaddiina. Waxa hubaal ah in aad si hufan u gudateen xilkii iyo waajibkii idinku beegnaa.
In kasta oo aynu xaqiijinay guulaha waaweyn ee aan soo sheegay, hadana uma jeedo in aanay jirin qabyo ama ay wax kastaa inoo dhan yihiin, hore ayaa loo yidhi: Shaqo Dawladeed Ma Dhamaato, ee Ninkeeda ayaa Dhammaada,Sidaa darteed, waxaan idinku boorinayaa in aad dedaalkiinii hore laban-laabtaan, isla markaana feejigo iyo fiiro dheer u yeelataan cid kasta oo doonaysa in ay khal-khal geliso degenaanshaha iyo xasiloonida dalka.
Dhinaca kale, waxaan idiinka digayaa in aad ku milantaan loolanka iyo laacdanka siyaasadda, taas oo ah mihnad iyo meherad rag kale leeyahay. Waxaan idinka waaninayaa Qabyaaladda iyo Qaadka oo aan ku tilmaami karo in ay yihiin Aafo Qaran.
Beryahan danbe waxa soo batay dilalka Ciidanka Qaranka dhexdiisa, gaar ahaan dilka Saraakiisha. Arrintani waa denbi iyo dhaqan fool xun oo aan loo dulqaadan Karin, waxaan u cadaynayaa in cid kasta oo geysata dil sharci-darro ah in cadaaladda la horkeeni doono, cawaaqibka ay leedahayna la dhadhansiin doono.
Xukuumadda aan madaxda ka ahay, waxay ku talaabsatay wax-qabad iyo horumar weyn oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda iyo haybadda Ciidamada Qaranka. Sida aad wada ogtihiin waxaannu kordhinay mushaharkii 130% laba jeer oo isku dhaw.
Ka dib 19 sanno markii uu sinnaa Subeehiga iyo Sarkaalka Ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaannu ku dhiiranay bixinta derajada garbihiina ku xardhan. Waxaannu u samaynay gunno dheeraad ah, gaar ahaan ciidamada jiidaha hore, gunnadaas oo dhan Askarigiiba 100,000 Somaliland Shilin.